गैर आवसीय नेपाली संघ कुवेतको नेतृत्वमा मध्य पुर्वको अक्सिजन सिलिण्डर अभियानलाई झन्डै १७ लाख सहयोग - Pardeshi Khabar
युग लामा / कुवेत – गत मे २८ शुक्रबार दिन कुवेत सिटीमाअक्सिजन सिलिन्डर सहयोगार्थ – संकलन अभियान समाप्त र त्यस अभियान अन्तर्गत हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न गैर आवसीय नेपाली संघ, NRNA-NCC कुवैतले पत्रकार सम्मेलन गरी हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेका छन ।
मध्यपुर्व NRNA को नेत्रित्वमा खाडी राष्ट्रमा अक्सिजन सिलिण्डर पठाऔँ, आफन्तको ज्यान बचाऔं एक अभियान चलाएको थियो । यो अभियानले ५६० वटा अक्सिजन सिलिण्डर ओमनबाट नेपाल पठाएको पठाइ सकेका छन ।
कुवेतमा कृयाशिल ४६ संस्थाहरुबाट १९५५. ५०० KD र ब्यक्तिगत तर्फबाट १७० जनाबाट १९१८. ७५० KD ब्यक्तिगत र संस्थागत गरी जम्मा ३८७४ KD शुक्रबारको कुवेती दिनार एक्सचेन्ज रेटमा १ KD = ३८० नेरूमा १४७२२१५, र NRNA-NCC कुवैतले २ लाख थप गरी जम्मा १६७२२१५ रुपैया बोल कबोल रकम उठेको र त्यस मध्येबाट १६ लाख ३१ हजार ८१५ रुपैया संकलन भैइसकेको अक्सिजन सिलिन्डर सहयोगार्थ – संकलन अभियानका संयोजक राना ध्वज लामाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताउनु भयो ।
तर केही ब्यक्ती र एउटा संस्थाबाट गरी बोलकबोल ८० KD दिनार उठ्न बाँकी रहेको पनि लामाले बताउनु भयो । यो रकम पनि छिट्टै उठ्नेमा उहा विश्वस्थ हुन्हुन्छ ।
यो अभियानमा अलमुल्ला क्लिनिङ ग्रुपबाट सबै भन्दा धेरै रकम ५३० KD उठेको पनि बताएका छन । साथै उठेको रकम तत्कालै गैर आवसीय नेपाली संघको केन्द्रको सचिवालयको बैंक खातामा पठाउने गैर आवसीय नेपाली संघ, NRNA-NCC कुवैतका अध्यक्ष सुजन केसीले बताएका छन ।
यस अभियानमा हातमा हात र साथमा साथ दिने सहयोगी मनका धनीहरुलाई गैर आवसीय नेपाली संघ, NRNA-NCC कुवैतले हार्दिक आभार एबं समेत प्रकट गरेका छन ।
संस्थागत र ब्यक्तिगत सहयोगीहरुको नाम र विवरण :-
« इराकसँग नेपाल ६–२ ले पराजित (Previous News)
(Next News) उज्वल थापाको स्वास्थ्य अवस्था ‘गम्भीर’ »